Fikradaha Taariikhda Fiyatnaamiis - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
TAARIIKHDA VIETNAM TAARIIKHDA waxaa ku jira maqaallo ku saabsan taariikhda Fiyatnaamiis laga soo bilaabo xilligii hore ee qaran ilaa xilligii gumeysiga Faransiiska.
Deganaanshaha bulshada ee qarnigii 15aad, dhaqanka iyo fanka ayaa awood u yeeshay in ay horumariyaan.
Markii la soo saaray Le, Confucianism-ka ayaa u sarreeyay si uu u noqdo fikirka asalka ah ee fasalka xukuma qarnigii 15aad.
Kani waa jadwalka taariikhda Fiyatnaamiis, oo ka kooban isbeddelo sharciyeed iyo mid dhul ahaaneed iyo dhacdooyin siyaasadeed oo ka dhacay Vietnam iyo dowladihii ka horeeyey.
Maqaalkani wuxuu ku saabsan yahay magacyada dalka Vietnam. Magacyada dadka ku nool Vietnam.